March 2020 - NEPALI KALAKAR
nepalikalakar March 21, 2020
एक त मरुभूमिको निर्दयी घाम अनि त्यो दिनको उखर्माउलो गर्मी । घाँटी सुक्यो, थोरै पानी पिउन मन लाग्यो । पानी तातेर पिउनै नहुने भारैछ । मुखमा हालेको पानी पनि ननिली थुकिदिए । साथीले खाना खाने ब्रेक भएको जानकारी दियो । टाउकोको हेल्मेट झिके, हातको पन्जा फुकालेर चोर औंलालाई बङ्गाएर निधारको पसिना पुछे । भोक बेसरी लाको छ तर गर्मीले बसाएको दाल र कक्रक्क परेको खबुस (रोटी ) देख्ने बित्तिकै खाने जाँगर कता भाग्यो कता । बालुवा माथि थचक्क बसेर लामो सुस्केरा हाल्दै दुई टुक्रा रोटी दालमा चोबेर मुखमा लैजानै लागेको थिए साथीले मोबाइलमा गीत बजायो :- पातको चुङ्गी खेलिन्थ्यो बारीमा… Read More
5 Comments on मलाई रुवाउने मान्छे – हेमन्त कान्छा रसाइली ( माया मार्यौ रे )
समीक्षा कपालु कोरेर VS पासपोर्ट हरियो भुमिका बिषयवस्तु र परिवेश समानता र असमानता शब्द समायोजन सङ्गीत पक्ष तथा गायन निर्देशन र अभिनय ————————########——————– भुमिका “कपालु कोरेर” र “पासपोर्ट हरियो” मेरा लागि उति नै प्रिय गीतहरु हुन् । हुन त परदेशी भएर होकि किन किन यस्ता गीतहरु सुन्नासाथ मनमा बसिहाल्छन् । कति मन छुने र यथार्थ छन् यी गीतका शब्दहरू । कति मुटु रेट्ने खालका छन् सङ्गीतहरु अनि गीतमा देखाइएका दृश्यहरुले आफु परदेश हिड्दाको दिनको सम्झना गराउछन् । म पनि सानै उमेरमा परदेश हिडेको मान्छे । आफू जन्मेको घर छोडेर अनि आफ्नो प्यारो देश छोडेर हिड्दाको दिन… Read More
6 Comments on कपालु कोरेर VS पासपोर्ट हरियो ( समीक्षा )
nepalikalakar March 17, 2020
हे बरै ! नेपाली बोलीचालीमा अति प्रयोग हुने शब्द हो, हे बरै !! गीत सङ्गीतमा चाहिँ यो शब्दको जन्म सारङ्गी सङ्गै भएको पो होकि भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ किन कि प्रायः गन्धर्व गीतको सुरुवात “हे बरै” बाट हुन्छ । उदाहरणका लागि स्वर्गीय लोकगायक झलकमान गन्धर्वको कालजयी लोकगीत “आमाले सोध्लिन् नि खोइ छोरा भन्लिन् ” बोलको लोकगीतमा पनि “हे बरै” बाट नै गीतको उठान भएको छ । सबैभन्दा पहिला त लोकसङ्गीतको भण्डारलाई भरिपूर्ण बनाउने यो लोकेली शब्द “हे बरै” लाई नमन छ । परापूर्व काल देखि अहिले सम्म नि यो शब्दको लोकप्रियता बिल्कुलै घटेको छैन । जसको उदाहरणका लागि केही… Read More
7 Comments on मौलिक लोकदोहोरी गीत – हे बरै ! सार्वजनिक
ए ! सानु म रोएको सुन्छ्यौ हौला र ?
nepalikalakar March 14, 2020
जब “ए ! सानु म रोएको सुन्छ्यौ हौला र” बोलको छोटो अडियो बाहिरियो, तब झ्वाट्ट सुन्दा म हिन्दी गीत “सुन् रहा हेन तु रोरहा हुँँ मे ” सँग भाव मेल खान्छ की भन्ने सोचाइमा रुमल्लिएको थिए । जब यही गीतको पूरा भिडियो सार्वजनिक भयो म हेरेको हेरै भए केही बेर अवाक रहे । पृथक परिवेश, यथार्थ भाव अनि समसामायिक बिषयवस्तुमा आधारित यो गीत सुन्दा मेरो भ्रमात्मक सोचाइ कहाँ बिलिन भो पत्तो पाइन । सुरु देखी अन्त सम्म एकाकृत भएर हेरिरहे परेली रसाइसकेछन् म बेहोसीलाई के थाहा । गीत सकिए पछि सुकसुकाउदै वाह ! क्या गीत भनेर पुन: दोहोराइ तेहेराइ हेर्न… Read More
8 Comments on ए ! सानु म रोएको सुन्छ्यौ हौला र ?
मेरा दुई शब्द म सङ्गीतको अनुरागी । साङ्गितिक क्षेत्रमा आफ्नो अलग्गै पहिचान बनाउने लक्ष्य राखेको मान्छे । गीत सङ्गीत भने पछि हुरुक्कै, फुरुक्कै । अपसोच रहर, सपना र कल्पना भन्दा धन र समय बलवान हुँदो रहेछ । सपना सिरानी हालेर निदाएको मान्छे ब्युझने पलको प्रतिक्षा गर्दा गर्दै जिन्दगी सकिन लागिसकेछ । भलै मेरा सपना अधुरै किन नरहुन् मलाई सङ्गीतको नशाले कहिले छोडेन । आफ्ना सिर्जनामा ढुसी पलाए पनि मेरा वरपर गुन्जिरहने हर सङ्गीतले मलाई आनन्द दिइरहेको हुन्छ । म कलाकार त बन्न सकिन तर कलाकारको कलम बनेर सर्जक र सिर्जनाका बारेमा केही लेख्न चाहन्छु । मलाई सङ्गीतका सबै बिधा उतिकै… Read More
18 Comments on लोकदोहोरी गायिका टिका सानु
मार्मिक गीत – आँसु बग्ने खोली सार्वजनिक
nepalikalakar March 13, 2020
प्रायः बिरही गीतहरु गाएरै चर्चामा आएका लोकदोहोरी गायक सुरेश रमण अधिकारी र शान्ता परियारको बिलकुलै नयाँ गीत “आँशु बग्ने खोली” हार्ट बिट नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत डिजिटल बजारमा सार्वजनिक गरिएको छ ।­ आँसु बग्ने खोली .. कहाँ छ नसोध मेरा आँखा बाट बग्छन् आज भोलि !! यता मलाई घरको पिर थियो पिरतीले अर्को पिर थप्दियो । यति छिट्टै छुटौला काँ थियो अभागी छु भन्ने त था थियो । यति रुदा उहिले ज्यान जानी थ्यो धन्न पीडा सहने बानी थ्यो । संसार जित्न सक्थे कि बरु भाग्य जित्न सकिन के गरु । खायो मलाई पिरैले दिन्दिन एना हेर्दा आफैलाई चिन्दिन ।… Read More
7 Comments on मार्मिक गीत – आँसु बग्ने खोली सार्वजनिक
मरे माटो मुनि हो – बाचुन्जेल बोले हुनी हो
nepalikalakar March 8, 2020
नेपाली कलाकार लोकदोहोरी गायिका सङ्गीता पौडेलले एक पछि अर्को नयाँ गीत डिजिटल बजारमा सार्वजनिक गराउदै आफ्नो साङ्गीतिक यात्रालाई अगाडि बढाइरहेकी छिन् । भर्खरै मात्र उनले आफ्नो नयाँ गीत “बिछोड हुनी हो” आफ्नै युट्युब च्यानल मार्फत डिजिटल बजारमा सार्वजनिक गराएकी छिन् । भाग्यमा नलेखे बिछोड हुनी हो ! मरे माटो मुनि हो, बाचुन्जेल बोले हुनी हो !! हिडेका छौ तरक्क तर्केर एकै आखर हेर्दैनौ फर्केर । आज भयो जीवनमा फाटो तर्की हिड्छ्यौ खोजेर दोबाटो । बुझ्नै गाह्रो भाबीको नेत्र कर्म चक्र जीवनको नक्षेत्र… Read More
6 Comments on मरे माटो मुनि हो – बाचुन्जेल बोले हुनी हो